Nezvedu - Shenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd.
Shenzhen UUGreenPower Magetsi Co, Ltd.ine nyanzvi yemagetsi & zvemagetsi R & D timu, yepakati R&D nhengo dzayo dzaimboshanda muEmerson & Eltek. Isu takaunganidza ruzivo rwemakore angangoita makumi maviri muiyo DC magetsi ekushandisa tekinoroji uye kuburikidza nehunyanzvi dhizaini isu tinokwanisa kunge takagadzira iyo super yekuchaja module akateedzana anosanganisira 40kW, 30KW, 20KW uye 15KW akasarudzika super super murwi.
Isu tinotarisa pane zvakakosha zvinhu uye mhinduro dzakazara dzemagetsi emagetsi emagetsi emagetsi emagetsi. Uye isu tinonyanya kupa zvigadzirwa zvakanaka zvemagetsi module, kuchaja murwi kuongorora mamodule uye kuchaja murwi mashandiro chikuva uye nezvimwe.
Parizvino isu tinozvirumbidza iyo yakazara yakazara zvigadzirwa zvakateedzana mumunda wekuchaja murwi simba ma module, uye isu tanga tichichengetedza inotungamira basa maererano nehunyanzvi uye zvigadzirwa. Iyo ficha yechigadzirwa 30kW yekuchaja module inowanzoshandiswa mumisika yekumba neyekunze kwenyika. Iyo nyowani IP65 yepamusoro inodzivirira yekuchaja module uye 40kW super simba rekuchaja module ichaburitswa mumusika pakupera kwa2020.
Seye kutanga-up nyowani nyowani tekinoroji yesimba kambani, UUGreenPower inotarisa kune emagetsi emagetsi hunyanzvi hunyanzvi, uye yakazvipira kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwezvinhu zvepakati zvemakomputa-ekupedzisira ekuchaja michina. Isu tinoomerera pakugadzirisa marwadzo evatengi, kukura pamwe nevatengi, uye pamwe chete kukurudzira kuvandudzwa kwemagetsi mota indasitiri ine girini simba uye yakaderera-kabhoni hupfumi.
Parizvino, Zvigadzirwa zvekambani zvakaedzwa uye zvakasimbiswa neHurumende Grid Electric Power Research Institute, CE chitupa, UL chitupa. Izvo zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya pamusika wepamba uye musika wekukunze, uye vane hukama hwakadzama nevatengi vanobva kuUnited States, Germany, France, Italy, South Korea, Thailand, neIndia.
UUGreenPower yakatanga kuvhura iyo 30kW yekuchaja module munaJune 2017. Ndiyo yekutanga inogadzira ine yakakura 30kW module tekinoroji muindasitiri, uye iri zvakare imwe yevaashoma module mamaki muindasitiri ayo akakura akaburitsa ma30kW ma module uye akaratidzirwa neiyo kushanda kwemusika. Sezvo huwandu hwemagetsi e30KW yekuchaja module iri kusvika pa45W / in3, iko kushandurwa kwekushanda kuri kwakakwirira, iko kuita kwechigadzirwa kwakanakisa uye mutengo wekubatsira uri pachena, iyo 30kW simba module yakurumidza kubata iyo yepamusoro-yekupedzisira uye yepamusoro-simba inokurumidza kuchaja musika.
UUGreenPower icharamba ichiwedzera yayo R & D kudyara mune yakakwira-simba kukurumidza kuchaja uye epamusoro-mashandiro ekuchaja ma module. Iyo 40kW super simba yekuchaja module uye IP65 dziviriro yepamusoro module ichaburitswa mukupera kwa2020 iyo icharamba ichibatanidza nzvimbo inotungamira yekambani mumunda weEV super kuchaja uye kuburitsa mhinduro.